Ukwakha kabusha Izindawo Ezishisayo Zepepper Creek nge-Recycled Dredge Material
Ukwakha kabusha izindawo ezinamanzi zasePepper Creek
I-Win-Win yama-Boilers nama-Bays
nguBartholomew Wilson, Umxhumanisi weSayensi
Ukwenza kabusha izinto akuyona nje into abahlali base-Inland Bays abangayenza ekhaya.
Iphrojekthi entsha yokuvuselela kabusha iyaqhubeka kuma-Inland Bays.
I-CIB isebenzisane noMnyango weDelaware Wezemvelo Nezokulawulwa Kwezemvelo (i-DNREC) ukuze iphinde isebenze kabusha emigodini edonswa iziteshi ukuze kwakhiwe imigwaqo engenayo ye-Inland Bays.
Emzamweni wokubambisana ukuqeda isidingo sezindawo ezintsha zokuphinda ubambe futhi ubonise amandla okusebenzisa lokhu okuqukethwe ukunciphisa imiphumela yokuncipha kokushona komoya kanye nokwenyuka kwamazinga olwandle, i-DNREC ne-CIB babeke ukubheka kwabo endaweni eyi-25-acre enkulu yemashi eshisayo. eduze kweVines Creek Marina.
Ngenqubo ebizwa ngokuthi ukusetshenziswa kabusha okuzuzisayo, kusetshenziselwa izinto zokwakha ukwakha izindishi eziphelelwe ngumhlaba, njengoba kunjalo, ngenxa yokunyuka kwezinga lolwandle. Ukuphakamisa ukuphakama kwabo kuzobenza bakhuthale ngokwengeziwe emitheleleni yokuguguleka kwamagagasi okubangelwa ukukhuphuka kwezinga lolwandle nokuncipha komhlaba.
Izinto ezibonakalayo zivela kuphrojekthi ye-DNREC dredge projekthi ukuze ijule isiteshi sokuhambisa e-Pepper Creek futhi ithuthukise ukufinyelela kwezithuthi zesikebhe. Imvamisa izinto zokwehlisa amanzi zizobekwa endaweni yokulahla upland, kepha le phrojekthi ibeka imfucuza futhi iqhubeke nokusebenza kuhlelo.
Ucwaningo lwamanje luveze ukuthi ukususa izinto ezi-dredge kusuka eziteshini nokulahla endaweni engaphandle kokufinyelela kwamagagasi kungaholela ekulahlekelweni isikhathi eside esilinganisweni sediment esikuhlelo futhi etholakalayo nenqubo yemvelo yokuvuselela -kwakha imashi; lubaluleke kakhulu emandleni abo okugcina ukuphakama nokuhambisana ijubane nokwenyuka kwamazinga olwandle.
Lapho lo dredge ushona phansi izinyawo eziningana ungene ezansi kwesiteshi, impahla idonswa ngepayipi le-8-inch elifakwe kancane emanzini, bese lihanjiswa ngepayipi eliya ebhaji elisogwini lolwandle oluqhele ngamamayela amamitha ayikhulu. Izinto ezisetshenziswayo ngemuva ziyaphoqelelwa nge-4-inch high-pressure nozzle bese zifafazwa emfudlaneni omude obheke endaweni yomashini. I-nozzle ingadayinwa ukuqondisa udeveli ezindaweni ezahlukahlukene.
Njengoba ifafazwa, i-brown slurry, okungamanzi e-90% kanye ne-10% sediment, igeleza ebusweni futhi ifakwa ezindaweni eziphansi zemashi. Kulindeleke ukuthi u-intshi owodwa kuya kweziyisithupha sediment uzofafazwa ngaphezulu komfula, lapho amabala aphansi kakhulu ethola ukusetshenziselwa okukhulu kwezinto.
Le ndlela yokufafaza imisele yokudonsa yamuva nje iyinto entsha kwiDelaware, kepha le nqubo yokusebenzisa izinto ezingamakhompiyutha isetshenziselwe ukubuyisa imashi engaphezulu eGulf Coast yaseTexas, eLouisiana, nase-Alabama iminyaka ethile. Kwi-DNREC, lokhu kungamaka inkathi entsha ekwehlisweni kanye nasekugcinweni kweziteshi zokuzulazula ze-Inland Bays. Okuyinto eyayivele ingumgqomo kadoti obabize ukuwususa nokuyilahla manje ingumthombo obalulekile, wasendaweni ongasetshenziswa ukusiza ekubuyiseleni izindishi nasemisebenzini ebalulekile enikezwa ngamaxhaphozi; Ukuhlunga kwamanzi, ukukhipha umhlaba kusuka ekushayelweni yisiphepho, nokuhlinzeka ngendawo yokuhlala enkulisa yezinhlanzi kanye nama-crustaceans.
Ukusetshenziswa kwesendlalelo esincanyana ePepper Creek kwaqhubeka kuze kube uMashi 31, lapho ukusebenza kwamiswa kuze kube sebusika obulandelayo ukunciphisa umthelela emphakathini wezinhlanzi emfuleni. Umsebenzi uzoqala futhi ekwindla.
Leli thimba leprojeki lifaka abamele abaqhamuka eSnreC's Shoreline and Waterway Section ye-DWREC, Isikhungo Sokuhlola Amanzi, iWetland kanye neSubaquible S likarolo, iDivity of Fish and Wildlife, kanye neDelaware Center for the Inland Bays basebenzisana ukukhombisa ukusebenza ngempumelelo kwezindlela zokubuyiselwa kwezinto zokwakha kabusha. kuma-Inland Bays.
Ngakho-ke ngokuzayo lapho ubona udaka lufafazwa emigqonyeni ye-Inland Bays, ungakhathazeki ukuthi akulona ipayipi elivuzayo, ukubuyiselwa kwenhlabathi ngokusebenzisa kabusha, kanzima emsebenzini wokwakha kabusha imishado yethu.
Kuphrintiwe kusuka Inland Bays Journal